Table Tennis Touch Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စားပွဲတင်တင်းနစ် Touch ကို
စားပွဲတင်တင်းနစ် Touch ကို APK ကို
, အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်လှည့်ဖျားနှင့်ဘုန်းအသရေဖို့သင့်ရဲ့လမ်းတပ်များ! ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်အလိုလိုသိပွတ်ဆွဲထိန်းချုပ်မှု, မြန်နှုန်းမြင့်ဂိမ်းနှင့်မျိုးစုံဂိမ်း Modes သာစားပွဲတင်တင်းနစ် Touch ကိုကမ္ဘာ့ #1 စားပွဲတင်တင်းနစ်ကစားပွဲစေပြီ။
•အလုပ်မှာ - ပြိုင်ပွဲ, လိခ်နှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များ featuring တစ်ဦးထုပ်ပိုးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode မှာရာထူးတဆင့်မြင့်တက်။ စားပွဲတင်းနစ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဖြစ်လာရန်ကလပ်, အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။
• MINI GAME FUN - တစ်ဝက်စားပွဲတင်, တိုင်ထောင်ပစ်ကစားနည်းများ, တိကျပြတ်သားမှုဇုန်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် 12 ထူးခြားတဲ့ ping ရဲ့ Pong စိန်ခေါ်မှုများ!
• multiplayer - လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းတွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါ်ဒေသခံ Real-time multiplayer ပွဲယူပါ။ ထိုအခါ Glass ကိုဇယားမှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစားပြီး - တမူထူးခြားတဲ့ multiplayer mini ကိုဂိမ်း။
• Custom - အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလင်းနို့သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့ 30 ဒီဇိုင်းများကျော်နှင့်အတူ customize ။
• realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း - ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Arena, လက်တွေ့ရူပဗေဒနှင့်ခေတ်မီ AI အ။
•အောင်မြင်မှုများ - စုဆောင်းဖို့ဆုဖလား၏ဝန်။
• OFFLINE Gameplay - မျှအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? Go ကိုအချို့သောဘောလုံးထိသွားတယ်!
Feedback OR မေးခွန်းများ?
ကျနော်တို့ဒါ support@yaku.to မှာကိုလိုင်း drop သို့မဟုတ် https://support.yaku.to မှာအမေးအဖြေများကျော်ထုတ်စစ်ဆေးသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ခစျြတင့်
- Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများ
219.65 ကို MB